ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 4°N 72°W﻿ / ﻿4°N 72°W﻿ / 4; -72
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ကိုလံဘီယာသမ္မတနိုင်ငံ (Republic of Colombia) ဖြစ်သည်။ တောင်အမေရိကတိုက်၏ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ နှင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် အီကွေဒေါနိုင်ငံ နှင့် ပီရူးနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ်၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ပနားမားနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက် ရှိသည်။    ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသည် ဗင်နီဇွဲလား၊ ဂျမေကာနိုင်ငံ၊ ဟေတီနိုင်ငံ၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ၊ နီကာရာဂွါနိုင်ငံ၊ ကော့စတာရီကာနိုင်ငံတို့နှင့် ပင်လယ်ရေပိုင်နက်အားဖြင့် နယ်ချင်းထိနေသည်။  လူဦးရေ ၄၅သန်းကျော်ရှိသော ကိုလံဘီယာသည် နိုင်ငံအလိုက် လူဦးရေများပြားမှု အဆင့်အနေဖြင့် ကမ္ဘာတွင် နံပါတ်(၂၉) ရှိသည်။ တောင်အမေရိကတိုက်တွင် ဘရာဇီးပြီးလျှင် ဒုတိယ လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ စပိန်နိုင်ငံတို့ပြီးလျှင် စပိန်စကားပြောနိုင်ငံများ အနက် စတုတ္ထ လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ 
ဆောင်ပုဒ်: "Libertad y Orden" (စပိန်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: 'Himno Nacional de la República de Colombia (စပိန်)
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
လူမျိုးစု (၂၀၁၈ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း)
၈၇.၅၈% လူဖြူ သို့မဟုတ် မက်စတီဇို
အီဗန် ဒူကေး မားကဲ့
မာတာ လူစီယာ ရာမီရဲ့
• ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ
လီဒီယို ဂါစီယာ တူဘိုင်း
• တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ
ဟိုဆေး လူအစ် ဘာစီလို
၁၈၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်
၁၈၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၇ ရက်
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်
• ပနားမားနိုင်ငံ ခွဲထွက်ခြင်း
၁,၁၄၁,၇၄၈ km2 (၄၄၀,၈၃၁ sq mi) (အဆင့်: ၂၅)
၂.၁ (၂၀၁၅ ခုနှစ် အရ)
၅၀,၃၇၂,၄၂၄ (အဆင့် - ၂၈)
၄၂.၂၃/km2 (၁၀၉.၄/sq mi) (အဆင့် - ၁၇၃)
$၈၂၇.၆၆၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၁)
$၃၄၃.၁၇၇ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၈)
မြင့် · ၈၃
ကိုလံဘီယာ ပီဆို (COP)
ကိုလံဘီယာတွင် ယခင်ကတည်းက နေထိုင်လျက် ရှိကြသော မူရင်းဒေသခံများမှာ Muisca၊ Quimbaya နှင့် Tairona တို့ဖြစ်သည်။ ၁၄၉၉တွင် စပိန်တို့ရောက်ရှိလာပြီး ဒေသခံများကို တိုက်ခိုက်ကာ ဘုရင်ခံအုပ်ချုပ်သော နယူးဂရင်နေးဒါး အဖြစ် ယနေ့ခေတ် ကိုလံဘီယာ၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ အီကွေဒေါ၊ ဘရာဇီးအနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် ပနားမားတို့ပါဝင်သော ကိုလိုနီနယ်မြေ ကို သိမ်းသွင်း ရယူခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က မြို့တော်ကို ဘိုဂိုတာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့သည်။  ၁၈၁၉တွင် စပိန်ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ၁၈၃၀တွင် ဂရန်ကိုလံဘီယာ ပြိုကွဲခဲ့ပြီး ဗင်နီဇွဲလားနှင့် အီကွေဒေါတို့က သီးခြားနိုင်ငံများအဖြစ် ခွဲထွက်သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ ယနေ့ကိုလံဘီယာနှင့် ပနားမားတို့ ပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီး နယူးဂရင်နေးဒါးသမ္မတနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၈၅၈တွင် ဂရင်နေးဒင်းကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ၊ ၁၈၆၃တွင် ကိုလံဘီယာပြည်ထောင်စု အဖြစ် ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၈၈၆တွင် [ကိုလံဘီယာ သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။  ပနားမား တူးမြောင်း ဖောက်လုပ်ရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံပေးရန်ရှိနေသော ဘဏ္ဍာငွေကြေးအတွက် ဖိအားပေးခံရသောကြောင့် ၁၉၀၃ခုနှစ်တွင် ပနားမားနိုင်ငံသည် သီးခြားခွဲထွက်ခဲ့သည်။
ကိုလံဘီယာသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဖြင့်အုပ်ချုပ်လာသော သမိုင်းကြောင်း ရှည်လျားသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ကိုလံဘီယာလစ်ဘရယ်ပါတီနှင့် ကိုလံဘီယာကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ တို့ကို ၁၈၄၈ နှင့် ၁၈၄၉ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ အမေရိကတွင် သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ပါတီနှစ်ခုကြား တင်းမာမှုများသည် ရံဖန်ရံခါ အဓိကရုဏ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၁၈၉၉-၁၉၀၂ တွင် ရက်တစ်ထောင်စစ်ပွဲ၊ ၁၉၄၈တွင် La Violencia တို့မှာ ထင်ရှားသောသာဓကများဖြစ်သည်။ ၁၉၆၄မှစ၍ အစိုးရစစ်တပ်၊ လက်ဝဲစွန်းပျောက်ကျားသူပုန်များ၊ လက်ယာစွန်းပြည်သူ့စစ်များကြား ယနေ့ထိတိုင်အောင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေလျက် ရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး တရားမဝင်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှု များကြောင့် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်းတွင် စစ်ပွဲများ ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ပြည့်လွန် ဆယ်စုနှစ်များတွင်မူ အကြမ်းဖက်မှုများ သိသိသာသာလျော့ကျသွားခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကြောင့် ပြည်သူ့စစ်များမှာ နေရာပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီး သူပုန်များမှာလည်း ယခင်က ထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးထားသော ဒေသများကို ရှုံးနိမ့်လက်လွှတ်ခဲ့ကြရသည်။   ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ တွင်မူ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများ တိုးတက်များပြားလာပြန်သည်။  မေပယ်လ်ခရော့ဖ်ထ်သုတေသနသိပ္ပံ ၏ စစ်တမ်းအရ ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ကိုလံဘီယာသည် မပြီးဆုံးသောသော မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ပွဲများ၊ အသစ်ထပ်ဖွဲ့လာကြသော ပြည်သူ့စစ်များနှင့် သူပုန်ပျောက်ကျားများ တို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ ဆဌမမြောက် အကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးတိုင်းပြည် ဖြစ်ခဲ့သည်။ 
လက်တင်အမေရိကတွင် စတုတ္ထမြောက် စီးပွားရေးအင်အားအတော့တင်းဆုံးဖြစ်သော ကိုလံဘီယာသည် အလယ်အလတ်တန်းအဆင့် ဩဇာရှိသောတိုင်းပြည်တစ်ခု ဖြစ်သည်။  သို့ရာတွင် ဓနဥစ္စပိုင်ဆိုင်မှု မညီမျှမှုများ ရှိနေသည်။ ၁၉၉၀တွင် ဆင်းရဲ-ချမ်းသာကွာခြားချက် ၏ ၁၀%မှာ ၄၀ အချိုး ၁ ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် အချိုးမှာ ၈၀ အချိုး ၁ အထိရောက်လာသည်။   ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ လု့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ ဆင်းရဲမှုနှုန်းမှာ လျော့နည်းသွားသည်။ သို့ရာတွင် လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော်မှာ ဆင်းရဲမှု မျဉ်း၏ အောက်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။  ၂၀၀၉ခုနှစ် တရားဝင်စာရင်းအရ ၄၆%မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေပြီး ၁၇%မှာ ဆိုးရွားစွာ ဆင်းရဲလျက် ရှိနေသည်။ 
ကိုလံဘီယာတွင် လူမျိုးစုများစွာကွဲပြားလျက် ရှိသည်။ ဒေသခံများ၊ စပိန်အနွယ်များ၊ အာဖရိကန်များ နှင့် ဥရောပနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများမှ ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူများဖြင့် ရောနှောလျက် ရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရှိနေသည်။ ကိုလံဘီယာ၏ ပထဝီဝင်အနေအထားမှာလည်း ကွဲပြားနေသည်။ မြို့ပြအများစုမှာ အင်ဒီးစ်တောင်တန်းကုန်းမြင့်ဒေသများတွင် တည်ရှိနေသည်။ ကိုလံဘီယာ၏ နယ်မြေမှာ အမေဇုန်မိုးသစ်တောများမှသည် အပူပိုင်းမြက်ခင်းပြင်များ၊ ကရစ်ဘီယံပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကမ်းရိုးတန်းများ စသည်ဖြင့် အစုံရှိသည်။ 
↑ Constitution of Colombia, 1991 (Article 10) (စပိန်)
↑ visibilización estadística de los grupos étnicos။ Censo General 2018။ Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)။ 16 August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ¿Cuántos somos?။ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)။ 27 March 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ World Economic Outlook Database: Colombia။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (October 2019)။
↑ GINI index (World Bank estimate) – Colombia။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်။
↑ LEY 47 DE 1993 (in es)။ alcaldiabogota.gov.co။
↑ The official Colombian time (in es)။ horalegal.inm.gov.co။
↑ Decreto 4175 de 2011, artículo 6, numeral 14 (in es)။ Presidencia de la República de Colombia။
↑ Gerhar Sandner, Beate Ratter, Wolf Dietrich Sahr and Karsten Horsx (1993)။ Conflictos Territoriales en el Mar Caribe: El conflicto fronterizo en el Golfo de Venezuela (in Spanish)။ Biblioteca Luis Angel Arango။ 1 March 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-01-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Geographer Office of the Geographer Bureau of Intelligence and Research (1985-04-15)။ Brazil-Colombia boundary (PDF)။ International Boundary Study။ 16 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-01-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CIA (2007-12-13)။ Ecuador။ World Fact Book။ 8 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-01-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tratados Internacionales limítrofes de Colombia။ 27 September 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Colombia – Limites territoriales။7July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Más 'speak spanish' que en España။ Elpais.com (2010-07-14)။ 2010-11-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nicolás del Castillo Mathieu (March 1992)။ La primera vision de las costas Colombianas, Repaso de Historia (in Spanish)။ Revista Credencial။ 2008-02-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ CIA world fact book (2009-05-14)။ Colombia။ CIA။ 13 May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-05-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UNODC.org Violence, Crime, and Illegal Arms Trafficking in Colombia (PDF)။ United Nations Office on Drugs and Crime (November 2006)။
↑ Newsweek http://www.newsweek.com/2010/09/09/colombia-wrestling-to-quell-local-drug-gangs.html
↑ CNN]http://articles.cnn.com/2010-02-03/world/colombia.violence_1_paramilitaries-rights-group-human-rights-watch?_s=PM:WORLD Archived 11 May 2011 at the Wayback Machine.
↑ BBC http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-10560568
↑ Maplecroft, terrorism risk index http://www.maplecroft.com/about/news/terrorism.html
↑ Colombia Reports http://colombiareports.com/colombia-news/news/12911-colombia-ranks-6-on-terrorism-risk-list.html
↑ David R. Davis, Brett Ashley Leeds and Will H. Moore (1998-11-21)။ Measuring Dissident and state behaviour: The Intranational Political Interactions (IPI) Project (PDF)။ Florida State University။2January 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-01-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stokes, Doug (July 1 2005). "America's Other War: Terrorizing Colombia". Canadian Dimension 39 (4).
↑ Rudolf Hommes။ "La otra seguridad democrática" (in Spanish)၊ El Colombiano၊ 22 de noviembre de 2009။
↑ OHCHR in Colombia (2008-2009)။ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights။ 29 December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-07-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Almost Half of 43.7 Million Colombians Live Below the Poverty Line။ MercoPress (May 4, 2010)။ 2010-07-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ¿Por qué Colombia no sale del club de los pobres?။ Revista Semana (March 13, 2010)။ 26 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-07-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ en Colombia Paisajes naturales de Colombia။ Telepolis.com။ 20 March 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-05-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ&oldid=728145" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။